नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्षले गरे घरको छतबाट हा’म्फा’*लेर आ’त्मह*’त्या।:: Mero Desh
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्षले गरे घरको छतबाट हा’म्फा’*लेर आ’त्मह*’त्या।
Published on: २१ आश्विन २०७८, बिहीबार १५:०८
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाप्रसाद चतुर्वेदीले आ’त्मह’*त्या गरेका छन् । उनले चारतलामाथिबाट हा’*मफा’लेर अ’त्मह*’त्या गरेको भिडियो सिसी क्यामेरामा कैद भएको पाइएको काठमाडौं प्रहरीले बताएको छ ।
क्यामेरामा उनी तलामाथि गएको र हामफालेको पनि दृष्य कै’द भएको प्रहरीले बताएको छ । हाल उनको श’व पो’ष्ट’*मार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतलामा लगिएको प्रहरीले बताएको छ । पोष्टमार्टमपछि थप तथ्य खुल्ने काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसए सपी अशोक सिंहले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा उनी डेढ वर्ष जेल बसेका थिए । काठमाडौं–७, बुलबुलेमा उनको घर निर्माण हुँदैछ । उनी उक्त निर्माणाधीन घरको अगाडि उनको श’व फेला परेको थियो । उनी पछिल्लो समय डिप्रे’शनबाट पीडि’त भएको बताइएको थियो ।
यो पनि,,खुशीको खबर ! अब कतार प्रहरीमा कतारमा रहेका नेपालीलाई लैजाने !
काठमाडौं : कतार प्रहरीका लागि बहू चर्चित मागपत्र प्रमा णीकरण शुरु भएर पनि काठमाडौं को एउटा मेनपावरले ल्याएको डिमान्ड रद्द समेत भैसकेको छ ।यदि तपाइ कतारमा हुनुहुन्छ र कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने यो खबर सुनेर तपाइको लागि यो समाचार सुखद हुन सक्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्रप्रमाणीकरणको अनु मति पाइसकेको राजधानीको लाजिम्पाटस्थित अल ता,,क्वेत ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. बाट पेश भएको उक्त माग पत्र प्रमा णीकरण गरेको भएको र ढिलासु स्तीको कारण कतार सरका रले रद्द गरिसकेको छ ।
कतार प्रहरीको लागि कतार सरकारले कतारमै कुनै एजेन्सी तथा मेनपावर कम्पनीलाई कतार बाट नै कतार प्रहरीको लागि छनौट गर्ने जिम्मा दिनसक्ने बताइदै आएको छ। कतरमा रहेका नेपाली वा भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरु लाई कतार प्रहरीको लाही लगिने सम्भावना अधिक रहेको समेत बताउदै आएको छ ।